Privacy နှင့် Cookie ပေါ်လစီ
နှစ်ခြင်းခံခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောလက်ဆောင်များကား အဘယ်နည်း။
အမျိုးအစား: ဘုရားအကြောင်းပြောပါ။ 0
နှစ်ခြင်းခံတဲ့အခါ ဘယ်လိုနာမည်ရသလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် နှစ်ခြင်းခံရမည်ဟု တမန်တော်ပေတရုက ဤသို့သတိပေးခဲ့သည်– “…နောင်တရ၍ သင်တို့တစ်ဦးစီ၏နာမ၌ နှစ်ခြင်းခံကြလော့။
အမေးများသောမေးခွန်း- သမ္မာကျမ်းစာထဲက ဆီဇာဆိုတာ ဘာလဲ။
Caesar သည် သမ္မာကျမ်းစာအရ အဘယ်နည်း။ “ဆီဇာ” ဟူသော ဝေါဟာရကို ခရစ်ယာန်ထုံးတမ်းစဉ်လာရှိသည့် နိုင်ငံများတွင် ယာယီအာဏာကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် (အာဏာကို ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် ...
မင်းမေးတယ်- ဘာသာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးက ဘယ်လိုလဲ။
ဘာသာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟူသည် အဘယ်နည်း။ ဘာသာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟူသည် အဘယ်နည်း… ပရိုတက်စတင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး—သို့မဟုတ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး—ကို ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် စတင်ခဲ့သော ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုဟု လူသိများသည်။
အကောင်းဆုံးအဖြေ- နိုဗားဆုတောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မည်သို့ ကြေငြာသင့်သနည်း။ နိုဗားကို ဘယ်လိုဖန်တီးတာလဲ။ ဒီနိုဗားကို ဆုတောင်းဖို့ နေ့တိုင်း ဆုတောင်းရမယ်၊ ဆုတောင်းရမယ်...။
မေးခွန်း- သမ္မာကျမ်းစာအရ ရှောလုဘုရင်ကား မည်သူနည်း။
သမ္မာကျမ်းစာ၏ဘုရင်ရှောလုကို မည်သူသတ်သနည်း။ ဒဏ်ရာရသောဘုရင်သည် ဖိလိတ္တိလူတို့ အဖမ်းခံရမည်ဟု ယူဆကာ လက်နက်ဆောင်လုလင်ကို သတ်ရန် တောင်းဆိုသော်လည်း ...
ကက်သလစ်အသင်းတော်တွင် တပ်မက်ခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း။
တပ်မက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာက ဘာပြောသနည်း။ ထို့ကြောင့် ကာမဂုဏ်သည် သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အပြစ်ရှိသော သို့မဟုတ် အကျင့်ပျက်သော အပြုအမူဟု ယူဆသည်...
တရုတ်ရိုးရာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုရဲ့ ဘုရားက ဘာလဲ။
မိရိုးဖလာဘာသာဆိုတာ ဘာလဲ။ မိရိုးဖလာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများသည် ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်နေထိုင်သည့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲအား ပြင်းထန်စွာအခြေခံ၍ အခမ်းအနားဖြင့်...
ကက်သလစ်အသင်းတော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကား အဘယ်နည်း။
ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှာ အဘယ်နည်း။ ၎င်း၏ မရှိမဖြစ် လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ ယူနစ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းသည့် သွန်သင်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ခြင်း၊ ဒီအတွက်ကြောင့်...
ဘန်၏ သေစေသော အပြစ်ကား အဘယ်နည်း။
သေစေတတ်သော အပြစ် ၇ ပါးမှ ကင်းလွတ်ခြင်းကား မည်သူနည်း။ ဘန် (Nanatsu no Taizai) နတ်သမီးဘုရင် ခြင်္သေ့ဘုရင့်နိုင်ငံတော်၏ ပင်ရင်းသစ်တောခုနစ်ခု၏ သေမင်းတမန်အပြစ်တရားခုနစ်ပါး၏ တားမြစ်အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့ဝင်...
မေးခွန်း- ရောမလူမျိုးများသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို မည်သို့ ပေါင်းစပ်ခဲ့သနည်း။
ရောမတို့၏ ခရစ်ယာန်များကို အဘယ်ကြောင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရသနည်း။ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးအကြောင်းရင်းမှာ ဂျူးများဘက်မှ ထင်ရှားသော မှားယွင်းသောအယူဝါဒဖြစ်သည်...
12... 6,338 နောက်တစ်ခု
သူ၏တရားဒေသနာများတွင် သူသည် အလုပ်သည် ကျိန်စာမဟုတ်သော်လည်း ကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟူသော သာသနာပြုသူများကို သင်ပေးသောကြောင့် Arcangelo Tadini သည် ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏လူမှုရေးဆိုင်ရာသွန်သင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို သွယ်ဝိုက်လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
တမန်တော်တွေအပေါ် ယေရှု ဘာသွန်းလောင်းခဲ့သလဲ။
သမ္မာကျမ်းစာအရ ခါးသီးမှုကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲ။
ဘာသာရေးဆိုင်ရာအချက်ဟူသည် အဘယ်နည်း၊ ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ကား အဘယ်နည်း။
ယေရှုသည် တမန်တော် ၁၂ ပါးကို မည်သည့်အချိန်တွင် ရွေးချယ်ခဲ့သနည်း။
ယေရှုကို သစ္စာဖောက်ပြီးနောက် ယုဒဘာဖြစ်ခဲ့သနည်း။
မင်းမေးတယ်– သမ္မာကျမ်းစာမှာ မြက်ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။
အကောင်းဆုံးအဖြေ– မော်ဒကဲအကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက ဘာပြောသလဲ။
© 2022 ထာဝရဘုရားသခင်
ဆက်သွယ်ရန် | ကြှနျုပျတို့အကွောငျး | Privacy နှင့် Cookie ပေါ်လစီ
¡ATECIÓN A ကျဆုံးသော TITULARES DE DERECHOS! ¡ Todos los materiales se publican en el sitio estrictamente con ဒဏ်ငွေများ informationativos y educativos! Si cree que la publicación de cualquier ပစ္စည်း ငြိစွန်း sus derechos de autor, asegúrese de contactarnosatravés del formulario de contacto y su ပစ္စည်း será eliminado ။